Dulqaadkii Shiikh Shariif, Xasan Shiikh Maxamuud iyo Dulyari Farmaajo. | RUUG-CADDAA
Posted by Halgame on April 22nd, 2019
Wargeyska Alhayat ayaa cadadkiisii 16868 ee soo baxay 10.06.2009 ayaa lagu soo daabacay warbixin xilligaa xaasaasi ahayd oo cinwaan looga dhigay “ Xukuumadda Shiikh Shariif oo qarka u saaran in ay burburto” warbixintaas oo aad u dheeray xilligaasna xiisa gooniya lahayd ayaan turjumay dhammaanteed, sida ay sheegtay warbixinta uu qoray Wargeyska Alhayat waxay ahayd mid qarsoodiya oo ay isweydaarsanayeen ciidamada Afrikanka ah ee dawladda garab kasiiya dhinaca amniga iyo madaxdoodu..
Xilligaas oo dalku marayey marxalad aad u adag waxaa mucaaradka ka mid ahaa oo aan laga fadhi jirin oo aad u qaatay warbixintii aan Turjumay xubno maanta ka tirsan xarunta Madaxtooyada oo warbaahin xilligaas ay gacanta ku hayeen muddo dheer ku soo celcelin jiray warbixinta.
Hadda waa xildhibaano waa wasiiro dhariga siyaasadeed la kariya madaxweyne Farmaajo , waa xubnaha uu aadka uga dhagaysto madaxweynuhu talada ee aanu mahadin labada sano iyo dheeraadka oo ugu jira shidhka hore ee gaadhiga.
Xilligaas waxay ahaayeen afku xooglayaal aan hadh iyo habeen laga nasan, geed gaaban iyo geed dheerna u koray siday iyagu xukunka gacanta ugu dhigi lahaayeen kolkii ay xukunkii gacanta ku dhigeena u adkaysan kari waayey dhaliilaha waxyaalaha muuqda ee aan qarsoomi karin.
Sidaas oo ay tahay ayaan marna loo yaraysan dhaliil madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo Madaxweyne Shiikh Shariif, oo dadka dhaliisha ugu xoogan waday xilligii Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud uu hormuud u ahaa Madaxweyne Farmaajo oo maqal iyo muuqaalba laga hayo dhaliilihii uu u soo jeedin jiray Xukuumaddii Xasan Shiikh Maxamuud.
Maanta madaxtooyada Soomaaliya waxaa dhex fadhiya mucaaradkii shalay oo aan doonayn ama jeclaysanayn In lagu dhaliilo farsamo xumooyinka muuqda maanta, oo iyagana shalay u muuqday.
Ka hadli maayo wiil dhalinyaro ah oo jacaylka uu wadankiisa u qabo indha tirayo dhaliilaha muuqda oo aan isagu xog ka ahayn dhacdooyinkii 18 sano ee ugu danbeeyey la soo maray iyo wixii ka horeeyey ba ,ama mid qabiilku madax maray oo tolnimo u caashaqasan madaxda xilligan, waxa ay muhiim tahay in ay is dhugtaan kuwii shalay mucaaradka ahaa ee maanta xilka haya ee hadana u cabban dhaliishooda marka la tilmaamo.
Mar-xaladihii la soo maray waxaa loogu dhaliil badnaa Shiikh Shariif iyo Xasan Shiikh Maxamuud waxayna muuujiyeen dulqaad, waxaanse dul ay dhaliilahooda ku xamilaan ka muuqan madaxweyne Farmaajo iyo inta dhariga siyaasada la karisa oo aanay is dhaadin marxaladii ay soo mareen iyo tan maanta ay ku sugan yihiin.
Warbixintii xilligaas xukuumaddii Shiikh Shariif laga qoray oo dheerayd waxbadan ayaad ka ogaan kartaa 10 sano ka hor sida xaalku ahaa iyo sida uu Shiikh Shariif uga gudbay caqabadihii ka horyimi, insha alaahu mar ayaan idinla wadaagi doonaa.
Qore: Asad Cadaani Ibraahim
« Buugaagta iyo hoggaanka Nabad &Nolol
Daraasad lagu muujiyey dadka xogtooda la xadi karo iyo lambarrada ay adeegsadaan »